Rooble iyo mucaaradka oo is-faham gaaray iyo laba shuruud oo uu aqbalay – Banaadir Times
By banaadir 25th February 2021 105 No comment
Xog aan ka helnay waan-waantii laga dhex-waday golaha midowga musharaxiinta iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegeysa in is-faham laga gaaray xalay.
Ilo ku dhow dhow xubnaha Ergada waan-waanta ka dhex wada Ra’iisul Wasaaraha iyo Murashaxiinta Mucaaradka ayaa Caasimada Online u sheegay in dhinacyada ay ku heshiiyeen inay maanta kulan qado ah ku yeeshaan Hotelka Decale, kulankaas oo ay ka qeyb-galayaan Midowga Musharaxiinta, Ra’iisul Wasaaraha, iyo Madaxweynayaasha Galmudug iyo HirShabelle.
Xogta aan helnay ayaa sheegeysa in is-afgaradka uu yimid kadib markii Rooble uu aqbalay laba ka mid ah ah saddex qodob oo ay soo gudbiyeen musharaxiinta. Qodobadan ay musharaxiintu ku xireen la kulanka madaxdaas ayaa kala ahaa:
1- In la cambaareeyo, raalli gelin laga bixiyo wixii dhacay 19 Febraayo.
2- In bannaan baxa la ogolaado.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa aqbalay labada qodob ee hore, balse qodobka saddexaad ee ka qeyb-galka shirarla ayuu sheegay inuu yahay mid ku xiran madaxweynaha, oo gacantiisa ka baxsan.
Arrintan ayaa imaneysa in ayada oo Golaha Midowga musharaxiinta Soomaaliya oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ay mar kale ku celiyey in banaan-baxa ay dhigayaan Jimcaha soo socda, iyagoo sharci darro aysan aqbali doonin ku tilmaamay go’aankii ay shalay xukuumadda xil-gaarsiintu ku sheegtay in wax banaanbax ah aan Muqdisho lagu qaban karin.
By banaadir 20th September 2018
Taliyihii hore ee NISA Gen Gaafow oo ku guuleystay Doorasho ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb
By banaadir 4th September 2018